Tani waa maqaal si buuxda loo cusbooneysiiyay oo ku saabsan iskuulada injineernimada ugu fiican Kanada oo leh deeqo waxbarasho oo ay siiyaan ardayda.
Injineeriyadu waa xulasho muhiim ah oo wax lagu barto, cilmiga ayaa jiray mudo aad u dheer wuxuuna arkay isbadal badan sida aduunyadu isu bedesho. Injineernimada waxaa looga baahanyahay ku dhowaad qayb kasta oo daraasad ah laakiin waxay kuxirantahay nooca, dunida casriga ah waxay soo bandhigtay qaabab kale oo injineernimo kuwaas oo si weyn ugu darsaday adduunka guud ahaan.
Barashada injineernimada waxay u baahan tahay shaqo badan, xamaasad, iyo xamaasad, iyo hay'ad waxbarasho oo wanaagsan ayaa si isku mid ah ugu dari doonta guushaada arday injineernimo si aad u gaarto hadafkaaga, kugu qalabeyso xirfadaha lagama maarmaanka u ah iyo aqoonta aad ku wajahdo adduunka injineernimada.
Kanada waxaa caan ku ah inay tahay mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee wax lagu barto adduunka, machadyada halkan ku yaal waxay bixiyaan waxbarasho tayo leh oo ku saabsan qayb kasta oo daraasad ah iyo maalgashi badan oo xagga waxbarashada ah awgeed, hay'adaha Kanada waxay leeyihiin xarumo cilmi-baaris oo casri ah oo lagu caawiyo ardayda hagaajinta daraasadaha wax ku oolka ah ee barashadooda.
Sidoo kale, shahaadada laga helay hay'adaha Kanada waxaa si caalami ah u aqoonsan shaqaalaha iyo hay'adaha kale labadaba. Marka, arday injineernimo ah oo ku dhammaystay waxbarashadooda Kanada, shahaadadaada ayaa laga aqbali doonaa meel kasta oo adduunka ah.
Kuwa doonaya deeqda waxbarasho ee injineernimada Kanadiyaanka, maqaalkani wuxuu kaloo muujinayaa tiro ka mid ah deeqdan waxbarasho oo ay si toos ah u siiyaan dugsiyada injineernimada codsadayaashooda iyo ardaydooda.
Waxaan horey u soo taxnay tiro ka mid ah deeqaha waxbarasho ee shahaadada koowaad ee Kanada wuxuu u furan yahay dhammaan qaybaha waxbarashada oo ay weheliyaan kuwa u dhigma deeq waxbarasho. Waxa kale oo jira tiro ka mid ah deeq waxbarasho oo buuxda oo lagu maalgeliyo Kanada in aan ku qornay taas oo diyaar u ah ardayda caalamiga ah iyo kuwa Kanada.
Ma waxaad dooneysaa inaad ku barato injineernimada Kanada laakiin waad ku wareersan tahay iskuulka aad dooraneyso?
Maqaalkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad nadiifiso jahwareerka ku saabsan taas oo sidoo kale ku siin doonta faahfaahinta deeqaha waxbarasho ee mid kasta oo ka mid ah dugsiyada. Waxaan la imid liistada si buuxda loo cusbooneysiiyay ee iskuulada injineernimada ugu fiican Kanada oo ay weheliso faahfaahintooda deeqaha waxbarasho oo kaa caawin kara maalgalinta waxbarashadaada, daboosho kharashyadaada nolosha ama aad u hesho agabka dugsigaaga.
Sidoo kale, ogow in dugsiyadan injineernimada ugu fiican ee Kanada ay sidoo kale qirayaan ardayda caalamiga ah iyaguna way dalban karaan oo ay u qalmi karaan deeqaha waxbarasho.
Marka laga reebo injineernimada, waxaa sidoo kale jira deeqaha farshaxanka ee Kanada iyo sidoo kale qaar deeqaha caafimaadka ee laga heli karo Kanada ardayda sayniska ee qaadanaya koorsooyinka caafimaadka.
Iskuulada Injineerinka Ugu Fiican Kanada
Jaamacadda Toronto, Kulliyadda Sayniska iyo injineernimada
Abaalmarinta Deeqaha ee ay bixiso Jaamacadda Toronto, Kulliyadda Sayniska iyo injineernimada
Jaamacadda British Columbia Engineering
Abaalmarinta deeqaha waxbarasho ee ay bixiso Jaamacadda British Columbia Engineering
Jaamacadda McGill, Kulliyadda injineernimada
Deeqaha ay bixiso Jaamacadda McGill, Kulliyadda injineernimada
Jaamacadda Waterloo, Kulliyadda injineernimada
Deeqaha ay bixiso Jaamacadda Waterloo, Kulliyadda injineernimada
Jaamacadda Alberta, Kulliyadda injineernimada
Deeq waxbarasho oo ay bixiso Jaamacadda Alberta, Kulliyadda injineernimada
Baadhitaan qoto dheer kadib, waxaan awooday inaan ururiyo 5-ta dugsi ee ugu fiican injineernimada Kanada iyagoo wata macluumaadkooda waxbarasho ee la heli karo.
Hoos, waxaan ku taxay dhammaan fursadaha deeqaha waxbarasho ee laga heli karo mid kasta oo ka mid ah iskuulada injineernimada Kanada kor ku xusan.
Jaamacadda Toronto ee Kulliyadda Sayniska iyo injineernimada ayaa ah mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu fiican Kanada sidoo kale, waxay laban laaban tahay mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu caansan Kanada. Iskuulku wuxuu caan ku yahay kaalintiisa weyn ee caalamiga ah ee dhinacyada muhiimka ah ee nolosha sida caafimaadka aadanaha, biyaha, falanqaynta xogta, iwm.
Kulliyaddu waxay soo saartaa qaar ka mid ah cilmi baarayaasha adduunka ugu wanaagsan iyo ardayda iyada oo loo marayo tababar adag, fursado khibrad la’aaneed oo dheeraad ah iyo khibrad xirfadeed sidoo kale waxay dejisay ardayda si ay u noqdaan jiilka soo socda ee hoggaamiyeyaasha iyo kuwa isbedel-doonka ah si ay u furfuraan mustaqbalka mustaqbalka.
Tani waa hay'ad ay ubaahan yihiin arday kasta oo injineernimo awood u leh inay qayb ka noqdaan si looga caawiyo soo saarista awoodahan iyaga iyo sida loo maareeyo guushooda. Si loo caawiyo ardayda, xitaa inbadan, machadku wuxuu leeyahay deeqo waxbarasho oo isdaba-joog ah oo ardaydu codsan karaan si ay uga caawiyaan uguna dhiirrigeliyaan waxbarashadooda.
Jaamacadda Toronto iyada oo loo marayo a heerka aqbalaadda oo hooseeya guud ahaan sidoo kale wax ku biiriyaa qaar ka mid ah kuwa ugu caansan koorsooyinka khadka tooska ah ee Kanada.
Diiwaanka, waxaa jira in ka badan 20 koorsooyinka onlaynka ah ee ay bixiso Jaamacadda Toronto ardayda caalamiga ah.
The Jaamacadda Toronto sii wadida barnaamijka waxbarashada sidoo kale waa la heli karaa iyada oo ku dhowaad aan lahayn shuruud aqooneed oo lagu aqbali karo.
Deeqdan waxbarasho ayaa sanadle la siiyaa ardayda ujeedadoodu tahay inay wax ka bartaan koorso injineernimo ee Jaamacadda Toronto waxayna soo bandhigeen waxqabad akadeemiyadeed oo gaar ah waxayna sidoo kale ku lug leeyihiin nashaadaadyo manhajka ka baxsan. Waxaa jira toddobo ka mid ah deeqdan waxbarasho oo kala ah;
Kulliyadda Cilmiga Sayniska & Shahaadada Ogolaanshaha Injineernimada: Deeqdani waxaa loogu talagalay muwaadiniinta iyo ardayda caalamiga ah umana baahna in la dalbado, ardayda si otomaatig ah ayaa loo tixgeliyaa markay codsanayaan kuliyadda. Qadarka deeqda waxbarasho waa $ 7,500
Kulliyadda Abaalmarinta Ogolaanshaha Sayniska & injineernimada: tixgelinta codsadayaasha abaalmarintan waa inay ahaadaan degane Ontario waxaana lagu abaalmariyaa iyada oo lagu saleynayo gaaritaanka tacliimeed ee wanaagsan iyo baahida dhaqaale. Deeqdani waxay u dhigantaa $ 10,000.
Jaamacadda Kanada Deeqaha Caalamiga ah ee injineernimada: Tani waa deeq waxbarasho oo dib loo cusbooneysiin karo oo la siiyay kaliya ardayda caalamiga ah ee codsada inay wax ka bartaan kuliyada injineernimada, uma baahna codsi maadaama ardayda si otomaatig ah loogu xusho waxqabadkooda tacliimeed. Deeqdani waxay u dhigantaa wadar ahaan $ 35,000 muddo afar sano ah oo daraasad ah.
Jaamacadda Kanada ee Deeqda Injineerinka ee Ardayda Asaliga ah: Tani waa deeq waxbarasho oo dib loo cusbooneysiin karo oo u furan codsadayaasha asaliga ah waxayna daboolaysaa waxbarista gudaha iyo gunnooyinka muddo afar sano ah oo ah barnaamijka waxbarashada ardayga.
Hatch Engineering Aborijiniska deeqda waxbarasho: deeqdan waxbarasho waxaa la siiyaa ardayda asaliga ah ee waddanka ku soo galay iyadoo lagu saleynayo waxqabadkooda tacliimeed, waa $ 8,000 muddo afar sano ah oo waxbarashada ardayga ah waana la cusboonaysiin karaa.
Stanley Timoshek Deeqda Injineerinka: deeqdani waxay u furan tahay arday ka socda Poland oo ku saleysan waxqabadka tacliimeed ee wanaagsan.
J. Dick & Ruth A. Sprenger deeqda waxbarasho ee ardayda qaangaarka ah ee injineernimada: deeqdani waxay ku saleysan tahay mudnaanta tacliimeed ee ardayda qaangaarka ah ee ku nool Kanada ama muwaadin Kanada joogto ah oo bilaabaya inuu yahay ardayga sanadka koowaad ee injineernimada korantada ama kombiyuutarka. Shakhsiyaadka dhammaystiray daraasad waqti-buuxa ah ama ku jiray xoog-shaqo ayaa laga doorbiday inay ku guuleystaan ​​deeqda waxbarasho waana la cusboonaysiin karaa sannadaha 2-4.
UBC injineernimada waa mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu fiican Kanada iyo macalimiin heer sare ah oo ay ka buuxaan macalimiin iyo cilmi baarayaal caan ah oo u heellan qaab waxbarid ah oo ku lug leh, khibrad leh, iyo kala duwanaansho ka dhigaysa injineerada UBC inay ku kala baxaan aasaas adag oo laga dhisi karo shaqo xiiso iyo abaal badan leh.
Ujeedada ugu weyn ee ah abuurista iyo ku dabaqida aqoonta isbedelada wanaagsan ee bulshada, ardayda ujeedadoodu tahay inay ku sii wataan koorso UBC Engineering waxay ku ag dhawaanayaan barafasoorradan cajiibka ah iyo cilmi baarayaasha heer caalami ah inay wax ka bartaan oo ay ka helaan dhiirigelin iyaga ka mid ah, ayna ka mid noqdaan bulshada. maamulida isbedelada wanaagsan ee bulshada.
Jaamacadda British Columbia sidoo kale waxay ku qoran tahay iskuulada ku yaal Kanada ee bixiya qalabka ardayda iyo deeq waxbarasho oo buuxda ardayda Kanada iyo kuwa caalamiga ah.
Injineerka UBC wuxuu bixiyaa taxane ah deeqo waxbarasho, bursooyin, iyo abaalmarino sanadle ah oo la siiyo ardayda ujeedadoodu tahay inay sii wataan koorso injineernimo. Deeqaha waxbarasho, deeqaha waxbarasho, iyo abaalmarinta waxaa lagu guuleystey iyadoo lagu saleynayo waxqabadka tacliimeed ee ardayga, isku darka gaaritaanka heer sare ee tacliimeed ee baahida dhaqaalaha, hoggaaminta ama ku-guuleysiga adeegga bulshada.
Injineerka UBC wuxuu leeyahay ilaa 8 deeq waxbarasho oo kaladuwan oo la bixiyo sanadkii si loo taageero loona dhiiri geliyo ardayda. Abaalmarintan ayaa kala ah;
Christopher Spencer Memorial Scholarship ee injineernimada: deeqdani waxay u furan tahay ardayda cusub ee doonaya inay bartaan koorsada injineernimada waxayna u qalantaa $ 6,700.
Abaalmarinta Dean Henry Gunning ee injineernimada: Abaalmarintan waxaa loogu talagalay arday gudaha ah oo leh waxqabad muuqda iyo adeegyo hoggaamineed, oo si toos ah uga galaya barnaamijka Bachelor of Science Applied Science dugsiga sare. Qaddarka abaalmarinta waa $ 1,200.
Elizabeth iyo Leslie Gould Galitaanka Deeqaha ee injineernimada: deeqdan waxbarasho waxaa la siiyaa arday caalami ah ama mid maxalli ah oo leh waxqabad tacliimeed oo aad u sarreeya waxayna muujisay kartida hoggaamineed ee galaya sanadka ugu horreeya ee Bachelor of Science Applied Science in Engineering. Qadarka deeqda waxbarasho waa $ 2,500 waana la cusboonaysiin karaa afar sano oo waxbarasho ah uma baahna codsi maadaama ardayda si otomaatig ah loo tixgeliyo.
Haweenka Daqiiqda ah ee Abaalmarinta Galitaanka Injineerinka: Abaalmarintan waxay u furan tahay gabadha ardayda ah ee gudaha ka soo baxda barnaamijka injineernimada si toos ah uga timaadda dugsiga sare waxayna muujisay heer sare oo tacliimeed iyo adeegyo hoggaamineed. Qaddarka abaalmarinta waa $ 10,000.
Deeqda Injineerinka ee Innovation: deeqdani waxaa la siiyaa ardayda waxqabadka muuqda ee tacliinta iyo hoggaanka toos uga galaya dugsiga sare barnaamijka injineernimada. Qadarka deeqda waxbarasho waa $ 5,000 waana la cusbooneysiin karaa illaa dhamaadka barnaamijka waxbarashada ardayga.
Fasalka injineernimada farsamada ee abaalmarinta gelitaanka ardayda asaliga ah ee injineernimada 1967 abaalmarintan oo ku saleysan mudnaanta tacliimeed, bulshada, iyo adeegyada hoggaaminta. Abaalmarintan gelitaanku waxay u dhigantaa $ 9,250, oo la siiyay arday asal ahaan asal ahaan ka soo galaya injineernimada UBC ama laga bilaabo dugsiga sare ama laga wareejiyo jaamacad kale oo ku taal Kanada.
Haweenka ku jira deeqaha gelitaanka injineernimada: deeqdani waxaa loogu talagalay arday dumar ah oo dumar ah oo doonaya inay sii wataan shahaadada koowaad ee injineernimada, heer sare ee tacliimeed, iyo waxqabadyada hoggaaminta ayaa looga baahan yahay inay helaan deeqdan waxbarasho. Wadarta guud ee deeqda waxbarasho waa $ 10,000
Yves iyo Cynthia Haweenka Dhiig-baxa ku jira Deeqda Soo-galitaanka Injineerinka: deeqdani waxaa la siiyaa ardayda haweenka ah ee gudaha, oo leh waxqabad tacliimeed oo heer sare ah oo ka qayb qaatay nashaadaadyo hoggaamineed, oo doonaya inay wax ku bartaan shahaadada koowaad ee injineernimada.
Musharrixiinta waxaa laga yaabaa inay si toos ah uga soo galaan dugsiga sare ama ay ka wareejinayaan xarun kale oo dugsiga sare ah. Deeqda waxbarasho waa la cusbooneysiin karaa waana wadarta $ 3,500.
Jaamacadda McGill, Kulliyadda injineernimada waa mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu fiican Kanada oo bixiya shahaadada koowaad iyo shahaadada koowaad ee koorsooyinka injineernimada. Machadku wuxuu u heellan yahay inuu wax baro ardayda sida loo sameeyo xulashooyin fahan, hal-abuurnimo, ganacsi-abuur, iyo inay qaataan ku-dhaqanka ugu wanaagsan iyada oo loo marayo habkeeda waxbarasho ee kaladuwan ee u faa'iideysan doona adduunka hadda iyo mustaqbalka.
Si loo caawiyo loona dhiirrigeliyo ardayda ujeedadoodu tahay inay wax ka bartaan injineernimada Jaamacadda McGill, Kulliyadda injineernimada waxay ardayda siisaa deeqo waxbarasho iyo noocyo kale oo gargaar lacageed sanadkiiba ah.
Jaamacadda ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay liiska jaamacadaha ugu raqiisan Kanada.
Deeqaha waxbarasho iyo kaalmada maaliyadeed waxaa la siiyaa sannad kasta ardayda leh awoodaha gaarka ah ee tacliinta iyo dhinacyada hoggaaminta ama ardayda leh baahiyo dhaqaale oo doonaya inay ku sii wataan shahaadada kulliyadda injineernimada.
Deeqdan waxbarasho ayaa kala ah;
Deeqaha Galitaanka: Deeqdani uma baahna musharrixiinta inay dalbadaan maadaama la xushay waqtiga gelitaanka, waxaa la siiyaa deeqdan waxbarasho iyada oo ay ugu wacan tahay waxbarashadooda heer sare. Qadarka deeqda waxbarasho wuxuu u dhexeeyaa wadarta $ 3,000 ilaa $ 10,000 sanadkii waana la cusbooneysiin karaa illaa dhamaadka barnaamijka afarta sano ee ardayga.
Deeqaha Gudaha: Waxaa lagu abaalmariyaa Xafiiska Arimaha Ardayda halka ardaygu uu ka diiwaangashan yahay barnaamijyadooda injineernimada. Deeq waxbarasho oo gudaha ah ayaa loo heli karaa ardayda heerka koowaad ee jaamacadeed ee sidoo kale wax ku biiriyay jaamacadda oo ay dhameystireen ugu yaraan hal sano oo ah barnaamijka BEng.
Qadarka deeqda waxbarasho waa $ 10,000 oo dib loo cusboonaysiin karo sanadaha 3
Deymaha iyo amaahda: Tani waxaa loogu talagalay ardayda ay dhibaatooyinka dhaqaale haystaan, waxay dalban karaan deeqaha McGill iyo amaah si ay waxbarashadooda u sii wataan oo ay dib ugu bixiyaan xilli dambe oo lagu heshiiyey oo leh dulsaar macquul ah.
Jaamacadda Waterloo waa xarun ku taal horudhaca hal-abuurnimada iyo goob barasho dhiirrigelin leh oo wax badan ka qabata cilmi-baarista dhiirrigelisa bulshada, warshadaha, iyo ururada. Ardaydu waxay ku qalabeysan yihiin xirfado cilmi baaris, aqoon, iyo farsamooyin muujinaya shaqadooda adduunka oo wax ku biiriya wax kasta oo ay awoodaan.
Kulliyadda injineernimada machadku waa mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu fiican Kanada iyo mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn sidoo kale, oo ay ka go'an tahay inay hogaamiso waxbarashada injineernimada, cilmi baarista, hal-abuurka, iyo hal-abuurnimada.
Jaamacadda Waterloo, Kulliyadda injineernimada oo ka mid ah iskuulada injineernimada ugu caansan Kanada waxay siisaa deeqo ardayda raba inay bartaan barnaamijka injineernimada iyo deeqaha waxbarasho qaarkood uma baahna codsi.
Jaamacadda Waterloo sidoo kale waxaa lagu soo qaatay inay ka mid tahay jaamacadaha ugu fiican Kanada inay wax ka bartaan injineernimada qaabdhismeedka.
Deeqda Hogaamiyaha Schulich: Deeqdani waxay ku habboon tahay oo lagu abaalmariyey musharixiinta gudaha oo leh heer sare oo tacliimeed, muujinta hoggaaminta, iyo ardayda ka qalin jabisa dugsiga sare ee iskudayaya sayniska, tikniyoolajiyadda, injineernimada, ama barnaamijka xisaabta. Deeqdani waxay u dhigantaa wadarta wadarta $ 100,000.
Deeqaha kale ee guud ee aan lahayn codsi waxaa ka mid ah:
Deeqda waxbarasho ee Madaxweynaha ee kala duwanaanta
Deeqda waxbarasho ee Madaxweynaha
Deeqaha Gelitaanka waxaa kafaala qaadaya Qalinjabiyeyaasha iyo deeq bixiyeyaasha
Deeqdan waxbarasho dhammaantood waxay leeyihiin astaamo isku mid ah, laguma dabaqi karo oo waxaa la siiyaa ardayda dhigata shahaadada koowaad ee qayb kasta oo daraasad ah sidaa darteed ardayda injineernimada way heli karaan sidoo kale Waxaa sidoo kale lagu abaalmariyaa iyadoo lagu saleynayo waxqabadka akadeemiyadeed ee wanaagsan iyo waxqabadyada hoggaaminta.
Marka loo eego qiimeynta caalamiga ah, Jaamacadda Alberta waxay ka mid tahay 5-ta jaamacadood ee ugu sarreeya Kanada, jaamacadduna waxay leedahay mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu wanaagsan Kanada. Waxaa loo yaqaanaa jaamacad tacliimeed iyo cilmi baaris dhameystiran oo bixisa barnaamijyo badan oo tacliimeed iyo xirfadeed ardayda si ay u codsadaan una noqdaan waxa ay had iyo jeer doonayeen inay noqdaan akadeemiyad-caqli badan.
Jaamacadda Alberta, Kulliyadda injineernimada waxay leedahay xarumo cilmi baaris heer caalami ah oo loogu talagalay ardayda inay ku dabaqaan aqoonta ay ku bartaan fasallada xaaladaha nolosha dhabta ah taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah hay'adaha ugu horreeya ee cilmi baarista injineernimada Kanada.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu wanaagsan Kanada dhexdeeda, iskuulku wuxuu caawiyaa oo uu dhiirrigeliyaa ardayda hiigsanaya inay wax ka bartaan injineernimada Jaamacadda Alberta oo ay la socdaan deeqo waxbarasho oo isdaba joog ah oo u dhigma malaayiin doolar oo loo kala qeybiyey dhowr qaybood.
Abaalmarinta Galitaanka: kuwani waa abaalmarino la siinayo ardayda galaya barnaamijka injineernimada sanadka koowaad ee dugsiga sare waxaana jira boqolaal abaalmarino noocan ah oo u dhexeeya $ 1,000 ilaa $ 50, 000. Ardayda leh heer sare ee tacliimeed iyo kartida hogaamineed ayaa la door bidaa inay ku guuleystaan ​​deeqdan waxbarasho.
Abaalmarinta Ardayda Sii Wadata: Abaalmarintan waxaa loogu talagalay ardayda ku dhameysatay ugu yaraan hal sano BEng, musharrixiinta la doorbido waa inay lahaadaan waxqabad tacliimeed oo fiican iyo muujinta hoggaaminta. Qiimaha deeqda waxbarasho wuxuu u dhexeeyaa $ 10,000.
Abaalmarinta Dibadda iyo Bixinta Codsiyada: shuruudaha abaalmarinta iyo nidaamka codsigu way ku kala duwan yihiin abaalmarinta ilaa abaalmarinta mararka qaarkoodna way noqon karaan kuwo aad u ballaaran.
Halkaas waxaad ku leedahay liistada buuxda ee iskuulada injineernimada ugu fiican Kanada oo leh deeqo waxbarasho iyo si aad ugu qalanto deeqaha waxbarasho waa inaad ku dadaashaa tacliin ahaan.
Liiskan la soo ururiyey ee 5-ta dugsi ee ugu fiican injineernimada Kanada oo leh deeqo waxbarasho ayaa kaa caawin doona xulashada hay'ad kaa caawin doonta qaabeynta kartidaada injineernimada iyo hal-abuurnimada shaqo aad adiga, bulshada, iyo adduunka oo dhan ka wada faa'iidi doontaan.
Koorsooyinka Injineerinka Farsamada ee Bilaashka ah ee 13
Deeqaha Canadianka Deeq waxbarasho oo buuxa Deeqda Masters Deeqaha PhD Cilmi-baaris iyo Wada-hawlgallo Barashada Hagaha Dibadda Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo Barashada Kanada | Gelitaan | Deeqaha waxbarasho | Khidmadaha | Deeqo iyo Deymo Ka hooseeya Deeqaha waxbarasho
iskuulada injineernimada ee KanadaIskuulada Injineerinka ugu Fiican Kanada oo leh Deeqo waxbarashodeeqaha injineernimada kanadiyaankaiskuulada injineernimada ugu raqiisan Kanadadeeqaha injineernimada ee KanadaIskuulada Injineerinka ee Kanadaiskuulada injineernimada ugu caansan KanadaDugsiyada injineernimada ee Kanada gudaheedashahaadada koowaad ee Iskuulada Iskuulada ee Kanada
Previous Post:15 Koorsooyin Karinta Khadka Tooska ah oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin
Post Next:Sida loogu guuleysto deeqda waxbarasho ee Trudeau Foundation Kanada - PhD
Machinge Panashe B wuxuu leeyahay,
May 19, 2022 at 5: am 35
Pingback: 10 -ka ugu sarreeya ee Sayniska ee Shaqooyinka Bayoolaji